DHEGEYSO-Xanuunka Shuban biyoodka oo ka dilaacay gobolka Gardafuu. – Radio Daljir
Luulyo 28, 2016 4:20 b 0
Tuulada Xaabo oo katirsan dagmada caluula ee Gobolka gardafuul ayaa waxaa laga soo sheegayaa in uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka . Waxaan ilaa iyo intalaxaqiijiyay cudurkaasi udhintay 2 qof halaka xanuunkan ay ujiifaan inkabadan labaataneeyo qof.
Waxaan iskudaynay in aan laxiriirno duqa dagmada caluula ee Gobolka gardafuul oo ay tuuladaasi ay hoostimaado waxaase noosuuragalin in aan qadka telfoonka kuhelno balse waxaa noosuura gashay in aan lahadalno oo arimahaasi aan ka waraysano siciid yuusuf diiriye oo ah gudoomiyaha golaha deegaanka ee dagmada Barayda .
Wariye Xasan heykal ayuu ugawaramay arimahaasi xaalada deegaanka.
Xukuumadda Puntland oo digniin u dirtay maamulka Soomaaliland.